Umgunyathi wamaShayina sewungenise emakhaya – Bayede News
Umgunyathi wamaShayina sewungenise emakhaya
ElaboHlanga libe nengxoxo ekhethekile nongoti oselandele uhwebo olungekho emthethweni e-Afrika nasemazweni aseMpumalanga.
by Nhlanhla Mtaka Posted on 1 November 2019 7 November 2019
Eminyakeni eyedlulayo iciko lomculo neshashalazi uMbongeni Ngema waqamba iculo elabe lihlaba isenzo sikasibali wakhe owadla imbongolo. Kuleli culo uNgema ubalisa ngokuthi ngokwenza njalo usibali ubadonsela amanzi ngomsele ngoba ubalethela izifo. Iculo leli lananelwa kakhulu ngabantu bevuma khona ukuthi imbongolo ayithathwa njengesilwane esingaba ngokuthize ngaphandle kokwelekelela emisebenzini enzima. Nokho konke lokho sekuguqukile njengoba lesi silwane sesiphenduke inoni kwizigilamkhuba zamaShayina nasebozinele amathuba omnotho kuso.
Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi kunokukhathazela kongoti nabezomthetho ngokuthi ukuvuleka mawala kwemboni yesikhumba sembongolo eShayina sekuholele ekubulaweni kulo lonke elaseShayina nase-Afrika. Kuthiwa isikhumba sembongolo siyabiliswa ukuze kucwengwe injimbilili ebizwa nge-ejiao esetshenziswa njengomuthi wamaShayina owenza igazi lihambe kahle ukhulise nomdlandla wocansi kanti futhi bawuthandela ukuba yisithako esivimbela ukuguga komuntu ngokushesha.I-ejiao isisetshenziswe ngamaShayina iminyaka engaphezu kweyizi-2000 kodwa onyakeni owedlule kuvele kwenyuka ukusetshenziswa kwayo emhlabeni. INingizimu Afrika iyodwa ithumela ngokusemthethweni izikhumba ezingashukiwe zezimbongolo eziyizi-10 500 eHong Kong naseShayina. Ngenxa yalesi simo sekukhona ukwesaba ekuthini isivinini lokhu okwenzeka ngaso kungasho ukuthi esikhathini esiyiminyaka elishumi iAfrika iyobe isibhekene nesimo esifanayo naleso sobhejane.
ElaboHlanga libe nengxoxo ekhethekile nongoti oselandele uhwebo olungekho emthethweni e-Afrika nasemazweni aseMpumalanga, uMnu u-Oscar Nkala. Le nsizwa encane ngomzimba nongayibuka uyeye uma ingakasho lutho ikhuluma ngezwi eliphansi uma ichaza ngomsebenzi esiwenzile nesikubonile ilandela izigilamkhuba zamaShayina emazweni ase-Afrika nangaphandle. UNkala ukhale ngohulumeni base-Afrika nenkohlakalo ekhona emingceleni yamazwe nokuyilapho kukhona imizila yokushushumbisa izimbongolo. Phakathi kwamazwe uNkala athe ayimigudu ubale elakuleli, iZimbabwe, iMozambique, iLesotho, eSwatini nelaseBotswana.
“Lo mkhuba wokuntshontshwa, ukubulawa nokushushumbiswa kwezimbongolo nobubikwa kakhulu emazweni asentshonalanga nempumalanga ye-Afrika sewuze wenabela nasemazweni aseningizimu ye- Afrika” kusho uMnu uNkala. Uveze ukuthi eNingizimu Afrika izifundazwe iLimpopo, iMpumalanga, iNorth West kanye neKwaZulu-Natal yilapho ongqondongqondo bamaShayina bebheke khona. Uthe izigilamkhuma lezi ziyazi ukuthi aboHlanga ikakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya kabazi ngomnotho wezimbongolo yikho nje zinohlelo lokuxhaphaza imiphakathi zingena ngezinhlaka zoBukhosi.
“Inkinga enkulu ukuthi aboHlanga abanalo ulwazi oluphelele ngomnotho olethwa yizimbongolo nabangahlomula kuwo ngaphandle kokuthi izimbongolo bazisebenzisela ukulima nokubathwalela imithwalo. Lesi yisizathu esenze iqembu lezigebengu zamaShayina zibone intuba yokuzoxhaphaza lo mnotho wendawo.
“Lezi gebengu zingene ezindaweni zaMakhosi sengathi zizozifunela izimbongolo esezindala nezigulayo nokuthi zifuna kuphela izikhumba zazo nokuzodala amathuba omsebenzi njengoba bezithi zizovula amadela ezizohlatshelwa kuwona. Kuthe uma sezinikeziwe imvume yokungena ngaphakathi zajika izinto ngoba zigcine sezithenga ngisho nezisencane izimbongolo abantu ebazidayisa ngama-R300 imbongolo iyinye”, kuchaza uNkala.
Ebuzwa ngemakethe yezimbongolo uthe yize ikhona nakwamanye amazwe asempumalanga kepha indaba enkulu iseChina naseHong lapho ngethani lezikhumba ungathola imali engama-400 kuya kuma-500 amadola ase-USA. Uthe eleNdlovukazi uMthaniya yilo eselizoba yikhonco elisemqoka ekusimamiseni le makethe. “Sithole ukuthi iningi lezimbongolo ezishushumbiswayo kwaZulu-Natal zeqiselwa eSwatini, eMozambique naseLesotho” .
Uveze ukuthi osekwenzeka wukuthi izigilamkhuba zamaShayina sezisebenzisana nabathile ekutheni ukuze inzuzo ithi xaxa izimbongolo lezi zihlinzelwe emaqeleni bese kudluliselwa isikhumba emaShayineni. Esinye isakhamuzi saseChina esicele ukuba lingadalulwa igama laso sivumile ukuthi nembala kwelakubo imbongolo iyinyama ikakhulukazi isikhumba sayo esisetshenziswayo nezinye-ke izicutshana angazichazanga.
Umhlola bawukhomba ekhaya
Omunye umuntu angazibuza ukuthi kungani kube lula ukuthi izigilamkhuba zingene ziphume kuleli ba ekubeni kukhona abaqaphe imigcele. Kulokhu uNkala kananazanga ukusho ukuthi umhlola usekhaya ngoba inkohlakalo ikubo laba abaqaphile. Lokhu kwafakazelwa ngumlisa oyigosa labashushumbisayo emngceleni wakuleli naseZimbabwe, uMnu uEdmore Mathibela.
Lo mlisa uyena ohola iqembu lezigilamkhuba elimatasa eMadimbo Corridor, ngasohlangothini lomngcele oluseNingizimu. Leli goso lazivumela lona elikwenzayo nsuku zonke:
“Uma imali esizoyithola isenelisa sishushumbisa ugwayi, amabhele endwangu, okumbiwa phansi nezitho zezimoto ezintshontshiwe. Nabantu abawela umngcele ngokungemthetho siyabashushumbisa kuhlangene nemfuyo eyebiwe okunaba yizinkomo, izimbuzi noma izimbongolo,” kuchaza uMathibela.
“Okuningi ukuntshontshwa kwezimbongolo ngasohlangothini lweZimbabwe kugqugquzelwa abantu bakhona abaqashwa ngamaqembu azinze esifundazweni iLimpopo. Siyabalekelela ngokuzishumbisa sizifake ngaphakathi eNingizimu Afrika.” UMathibela uthe lo mkhuba wokugwazisa nenkohlakalo usuphendule izindawo ezingasemngceleni seziphenduke isizinda sobugebengu kanti nabaqaphi bayingxenye yokonakala. “Amaphoyisa nabashushumbisi bayasebenzisana,” kuchaza uMathibela. “Abanye abaqaphi bayingxenye ephelele yabashushumbisi nezimpimpi ezidlulisela ulwazi ezigebengwini ngabanye abaqaphi besebeyakhokhelwa ngalokho.”
Uqhubeke wathi abombutho wokuvikela namaphoyisa bayingxenye yabo bonke ubugebengu. Ngokusho kwakhe awekho amaqembu ezigebengu akwazi ukuqhubeka nomsebenzi wawo ngaphandle kosizo lwamaphoyisa.
Leli phephandaba lingakuqinisekisa ukuthi sekukhona namadela lapho kusetshenzwa khona izimbongolo ukuze kuhwetshwe ngazo. UNkala unxuse iminyango kaHulumeni okungoweZemvelo, oweZolimo kanye nezinhlaka zoBukhosi ukuba bayisukumele kungakonakali kakhulu le ndaba yaKwaZulu-Natal yokuntshontshwa nokubulawa kwezimbongolo.
Iphawula ngalokhu iNkosi yaseMadungeni nenguSihlalo weNdlu ithe: “Yize sisazophenya ngalokhu kepha kuhlale kuxaka njalo ukuthi uma sekwenziwa umnotho ngento ephakathi kwabantu bese kuqhamuka abangaphandle basiqonele benze inzuzo. Lokhu yikho okudala nokungqubuzana kwabantu njengoba sizwa kukhulunywa ngakho nje phakathi kwabokufika nabendawo,” kusho uMdunge.
Abomnyango KwaZulu-Natal nakuzwelonke abatholakalanga ukuphawula.
Posted in Ozul'azayithole, S-one